Assad oo 11 sano kaddib Imaaraadka ka degey & danta ka dambaysa ee UAE ka leedahay (Dal lagu xumaynayo?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Assad oo 11 sano kaddib Imaaraadka ka degey & danta ka dambaysa...
Assad oo 11 sano kaddib Imaaraadka ka degey & danta ka dambaysa ee UAE ka leedahay (Dal lagu xumaynayo?)
(Abuu Dabeey) 19 Maarso 2022 – MW Syria ee Bashar al-Assad ayaa la kulmay dhaxal-sugaha Abuu Dabeey, Mohammed bin Zayed (MBZ), wax noqonaya booqashadiisii ugu horreeysey tan iyo 2011 markii uu qarxay dagaalka dalkiisu.
Assad ayaa sidoo kale tegey Dubai si uu ula kulmo hoggaanka Imaaraddan, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, sida ay xaqiijisay Madaxtooyadiisu.
Sida ay faafisay Wakaalad Wareedka Imaaraadka ee WAM, MBZ iyo Assad ayaa ka xaajoodey in ciidamada shisheeye laga saaro dalka Suuriya iyo kaalmo aadminnimo oo la siiyo.
“Assad iyo UAE – waxay muujinayaan hiilladii kali-talisyada,” ayuu tweet gareeyey Kristyan Benedict, maamulaha xasaradda ee Amnesty International.”
Assad in the UAE – solidarity between dictators. pic.twitter.com/uJ0BUXIGhR
— kristyan benedict (@KreaseChan) March 18, 2022
Kulankan ayaa muujinaya ishaarada ugu cad ee muujinaysa isku soo noqodka Dimishq iyo Carabta gobolka, wax loo qaatay arrin lagu wiiqayo saamaynta Iiraan.
Boqorka Urdun ayaa bishii Oktoobar telefoonka kula hadlay Assad isagoo u qalqaalo tegey in cunaqabataybta laga qaado isagoo kala hadlaya Washington si dhaqaalihiisa burburay uu usoo kabto oo uu dalalka deriska ula ganacsado.
Previous article”Idinkuna xaaqin ku duula hadda kaddib!” – Ruushka oo Maraykanka kaga aarsaday Hawada Sare (Sida uu muhim u yahay & ISS oo dhulka lagu soo dayn karo)
Next article“Haddii aad iga baqayso hal gacan baan kugula dagaallamayaa!” – Ninka dunida ugu taajirsan oo Putin ka codsaday inuu la feertamo